North Korea Air Koryo ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto duulimaadyadii Shiinaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » North Korea Air Koryo ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto duulimaadyadii Shiinaha
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • News • Kuuriyada Woqooyi Oo Jebisay Wararka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ma jirin wax duulimaad ah oo ka duulay Pyongyang kuna sii jeeday Beijing inkasta oo lagu dhawaaqay
Waqooyiga Kuuriya waxay xirtay dhammaan dekedaha laga soo galo dhulka, badda ama hawada Janaayo 2020
Waqooyiga Kuuriya waxay muujineysaa "calaamado sii kordhaya" oo lagu fududeynayo xayiraadaha xadka ay la leedahay Shiinaha
Mar sii horeysay, Air Koryo ayaa sii deysay jadwalka duulimaadkeeda magaalada dekedda leh ee Ruushka ee Vladivostok
Kuuriyada Woqooyi Hawada koryo ayaa u muuqata in lagu wado inay dib u bilowdo howlaheedii laba duulimaad oo u dhexeeya Pyongyang iyo Beijing toddobaadkan, websaydhka shirkadda ayaa muujisay maanta. Wali si buuxda uma cadda in iyo goorta saxda ah ee adeeggu dib u bilaabmi doono ka dib muddo sannad ka badan oo ganaax ah iyada oo ay jirto xaddidaadda xuduudaha ee COVID-19.
Jadwalka duulimaadka ee lagu daabacay websaydhka xambaara calanka Waqooyiga Kuuriya, duulimaadka shirkadda JS251 ayaa ka duuli doonta Pyongyang 4:00 pm waxayna imaan doontaa Beijing 5:50 pm Khamiista. Duulimaad kale ayaa loo qorsheeyay inuu ka ambabaxo magaalada Beijing kuna sii jeedo Pyongyang maalinta jimcaha.
Laga soo bilaabo 4:30 galabnimo, si kastaba ha ahaatee, wax duulimaad ah kama aysan bixin Pyongyang, sida laga soo xigtay kormeeraha duulimaadka waqtiga dhabta ah. Qaarkood waxay qiyaaseen in diyaaradda ay tijaabin laheyd degelkeeda si ay ugu diyaar garoobaan inay dib u bilaabaan duulimaadyadooda Shiinaha.
Goor sii horreysay maanta, sarkaal ka tirsan wasaaradda mideynta ayaa u sheegay wariyeyaasha in Kuuriyada Woqooyi ay muujineyso "calaamado sii kordhaya" oo ay ku qafiifinayso xadka ay la leedahay Shiinaha.
Waqooyiga Kuuriya waxay xirtay dhamaan dekedaha laga soo galo dhulka, badda ama hawada Janaayo 2020 iyadoo la adeegsanayo dadaalka looga hortagayo coronavirus-ka inuu ku faafo dalka.
Mar sii horeysay, Air Koryo ayaa sii deysay jadwalka duulimaadkeeda magaalada dekedda leh ee Ruushka ee Vladivostok, laakiin ma aysan ka howlgalin duulimaadyada halkaas.
Waqooyiga Kuuriya ma soo sheegin wax kiis ah oo ah infekshanka COVID-19, laakiin waxay ku baaqday dadaallada waddanka oo dhan si looga hortago fayrasku inuu ku soo baxo dhulkiisa iyada oo loo marayo xoojinta kantaroolka xudduudaha iyo adkaynta hannaanka karantiilka.